Nceda Abantwana Baxhathise Izilingo
NGABA wakha wacelwa ngumntu ukuba wenze into ephosakeleyo?— Ngaba wakunyanzela ukuba uyenze? Okanye ngaba wathi oko kwakuya kuba mnandi yaye akuphosakalanga?— Xa ubani esenza oko uzama ukusilinga.
Yintoni esimele siyenze xa silingwa? Ngaba simele sinikezele size senze okuphosakeleyo?— Oko akuyi kumkholisa uYehova uThixo. Kodwa ngaba uyazi ukuba ngubani oya kuvuyiswa koko?— NguSathana uMtyholi.
USathana lutshaba lukaThixo, yaye ukwalutshaba lwethu. Asinako ukumbona kuba ungumoya. Kodwa yena unako ukusibona. Ngenye imini uMtyholi wathetha noYesu, uMfundisi Omkhulu, yaye wazama ukumlinga. Makhe sibone oko uYesu wakwenzayo. Ngoko siya kuyazi into elungileyo esimele siyenze xa silingwa.
Yintoni ekusenokwenzeka ukuba uYesu waqalisa ukuyikhumbula xa wayebhaptizwa?
UYesu wayesoloko efuna ukwenza ukuthanda kukaThixo. Oku wakubonisa esidlangalaleni ngokubhaptizwa kuMlambo iYordan. Kwakusemva kokubhaptizwa kukaYesu kanye xa uSathana wazama ukumlinga. IBhayibhile ithi “amazulu avuleka” kuYesu. (Mateyu 3:16) Oku kusenokuthetha ukuba uYesu waqalisa ukukhumbula ngobomi bakhe bangaphambili ezulwini xa wayekunye noThixo.
Emva kokubhaptizwa kwakhe uYesu waya entlango ukuze acamngce ngezo zinto wayezikhumbula. Wagqiba iintsuku ezingama-40. Ngalo lonke eli xesha uYesu akazange atye nto, ngoko wayelambe gqitha. Kwakungelo xesha apho uSathana wazama ukulinga uYesu.
UMtyholi wawasebenzisa njani amatye ukuze alinge uYesu?
UMtyholi wathi: ‘Ukuba ungunyana kaThixo, yithi kula matye makabe zizonka.’ Hayi indlela esasiya kuba mnandi ngayo eso sonka! Kodwa ngaba uYesu wayenokukwazi ukujika amatye abe zizonka?— Ewe, wayenokukwazi. Ngoba? Kaloku uYesu, uNyana kaThixo, wayenamandla akhethekileyo.
Ngaba wena wawuya kulijika ilitye libe sisonka ukuba uMtyholi wayekucele ukuba wenjenjalo?— Khumbula ukuba uYesu wayelambile. Ngaba kwakungayi kuba yinto efanelekileyo ukuba enze oko nokuba nje kukanye?— UYesu wayesazi ukuba kwakuphosakele ukusebenzisa amandla akhe ngaloo ndlela. UYehova wayemnike loo mandla ukuze atsalele abantu kuThixo, kungekhona ukuwasebenzisela iinjongo zakhe.
Ngoko kunokuba enze oko, uYesu waxelela uSathana ukuba eBhayibhileni kubhaliwe kwathiwa: ‘Umntu akaphili ngasonka sodwa, kodwa uphila ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaYehova.’ UYesu wayesazi ukuba ukwenza oko kumkholisayo uYehova kubaluleke ngakumbi kunokufumana ukutya.
Kodwa uMtyholi waphinda wazama. Wathabatha uYesu wamsa eYerusalem waza wammisa enkcochoyini yetempile. Emva koko uSathana wathi: ‘Ukuba ungunyana kaThixo, ziphose phantsi. Kaloku kubhaliwe kwathiwa iingelosi zikaThixo ziya kukukhusela ungenzakali.’
Kwakutheni ukuze uSathana athethe oko?— Wayezama ukumlinga uYesu ukuze enze into ebubuyatha. Kodwa kwakhona uYesu akazange amphulaphule uSathana. Wathi kuSathana: “Kubhaliwe kwathiwa, ‘Uze ungamvavanyi uYehova uThixo wakho.’” UYesu wayesazi ukuba kuphosakele ukulinga uYehova ngokubeka ubomi bakhe esichengeni.
Sekunjalo, uSathana akazange anikezele. Emva koko wathabatha uYesu wamsa kwintaba ephakame kakhulu. Apho wambonisa zonke izikumkani, okanye oorhulumente behlabathi nozuko lwabo. Wandula ke uSathana wathi kuYesu: “Zonke ezi zinto ndokunika ukuba uthe wawa phantsi wanqula kum.”
Khawucinge nje ngoko kwakuthenjiswa nguMtyholi. Ngaba ngokwenene zonke ezi zikumkani, okanye oorhulumente babantu, zezikaSathana?— Kaloku, uYesu akazange ayiphikise into yokuba zezikaSathana. Ngewayemphikisile ukuba yayingezozakhe. Ewe, uSathana ungoyena mlawuli wezizwe zonke zehlabathi. KwaneBhayibhile imbiza ngokuba ‘ngumlawuli weli hlabathi.’​—Yohane 12:31.
Kwenzeka njani ukuba uSathana akwazi ukuthembisa uYesu ngazo zonke izikumkani?
Ubuya kwenza ntoni ukuba uMtyholi ukuthembisa ngento ethile xa unokumnqula?— UYesu wayesazi ukuba kwakuya kuba yinto ephosakeleyo ukunqula uMtyholi kungakhathaliseki ukuba yintoni awayeza kuyifumana. Ngoko uYesu wathi: ‘Hamb’ umke, Sathana! Kuba iBhayibhile ithi nguYehova uThixo wakho omele umnqule, yaye umele ukhonze yena yedwa.’​—Mateyu 4:1-10; Luka 4:1-13.
Yintoni oya kuyenza xa ulingwa?
Nathi zikho izilingo esijamelana nazo. Ngaba zikho ozaziyo?— Nanku omnye umzekelo wazo. Masithi umama wakho wenze ikeyiki eza kutyiwa emva kwesidlo. Usenokuthi uze ungayityi de kufike ixesha lesidlo. Kodwa ulambe gqitha, ngoko usenokuyirhalela. Ngaba uya kumthobela umama wakho?— USathana ufuna ukuba ungamthobeli.
Khumbula oko kwenzeka kuYesu. Naye wayelambe gqitha. Kodwa wayesazi ukuba ukukholisa uThixo kubaluleke ngakumbi kunokutya. Uya kuba ulinganisa uYesu xa usenza oko ukuxelelwe ngumama wakho.
Abanye abantwana basenokuthi kuwe ginya iipilisi. Bangakuxelela ukuba ziya kukonwabisa gqitha. Kodwa kusenokwenzeka ukuba ezi pilisi ziziyobisi. Zinokukugulisa gqitha zide zikubulale. Okanye omnye umntu unokukunika isigarethi, nayo esisiyobisi, aze akunyanzele ukuba utshaye. Uya kwenza ntoni?—
Khumbula oko kwenzeka kuYesu. USathana wazama ukwenza uYesu ukuba abeke ubomi bakhe esichengeni ngokuthi makaziphose phantsi etempileni. Kodwa uYesu akazange akwenze oko. Yintoni obuya kuyenza ukuba kukho umntu okunyanzela ukuba wenze into ethile eyingozi?— UYesu akazange amphulaphule uSathana. Nawe umele ungaphulaphuli nabani na ozama ukukuphembelela ukuba wenze into engalunganga.
Kutheni kuphosakele nje ukusebenzisa imifanekiso ekunquleni?
Ngenye imini usenokucelwa ukuba unqule umfanekiso, nto leyo iBhayibhile ethi asimele siyenze. (Eksodus 20:4, 5) Oko kusenokwenzeka kwitheko lasesikolweni. Usenokuxelelwa ukuba akunakuphinde uze esikolweni ukuba akukwenzi oko. Yintoni obuya kuyenza?—
Kulula ukwenza oko kulungileyo xa kusenziwa ngabo bonke abantu. Kodwa ukwenza okulungileyo kusenokuba nzima gqitha xa abanye besiphembelela ukuba senze into engalunganga. Basenokuthi oko bakwenzayo akuyonto imbi kangako. Kodwa umbuzo obalulekileyo ngulo, Uthini yena uThixo ngoko? Nguye okwaziyo okona kulungileyo.
Ngoko kungakhathaliseki ukuba bathini na abanye, asifanele senze izinto uThixo athi azilunganga. Ngaloo ndlela siya kusoloko simvuyisa uThixo, yaye asinakuze sikholise uMtyholi.
Inkcazelo engakumbi ngendlela yokuxhathisa isilingo sokwenza okubi ifumaneka kwiNdumiso 1:1, 2; kwiMizekeliso 1:10, 11; kuMateyu 26:41 nakweyesi-2 kuTimoti 2:22.